Webiga Jubba Oo Fatahay iyo Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka Oo Gurmad wada.(Dhagayso Warbixin Gaar ah) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On May 20, 2018 298 0
Bulshadii ku dhaqneyd hareeraha webiga Jubba gaar ahaan laga bilaabo Bu’aale ilaa magaaalada Jilib ayaa barakacday ka gadaal markii webigu si daran u fatahay.
Dadka halkaan ku dhagan noloshoodu waxay ku tiirsan tahay beeraha laakiin iminka xaaloodu way adagtahay, waxaana Allaah uga baryaynaa in uu samata bixiyo.
Webigu wuxuu dhulka la simay wixii dalag ahaa ee ku yiil dhul ballaaran oo ay ku noolaayeen kumnaaan dad ah.
Naaquudaha doon aan uga safarnay Bu’aale oo na geysay Jilib intii aan xaaladda eegeynay wuxuu ii sheegay in Jilib iyo Bu’aale isu jiraan 240 KM marka dhanka webiga lagu socdaalayo maadaama uu hadba dhan u jiiranayo,inkastoo labadaan magaalo markii dhulka lagu safro isu jiraan 120 kiilo-mitir.
Wixii dalag ahaa ee dhulkaan ka baxay waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay kaaga sii daran iminka waxba lama beera karo maxaa yeelay webiga ayaa saacad kasta sii fatahaya mararka qaarna waxa uu jabsanayaa meelo hor leh.
Beeruhu waxay isu bedeleen haraha biyo fariisinada ah ee wadamada qaar ku yaal oo kale.
Waxaanu aragnay tuulooyin laga barakacay oo biyuhu buux dhaafiyeen iyo kuwo weli la degan yahay laakiin guryaha qaar biyuhu ku jiraan.
Meelaha qaar webiga jiinkiisa ah ee taagaga ah waxaa ku soo bara kacay qoysas fatahaaddu saameysay, waxaana laga dareemayaa is bedel dhanka nolosha ah maadaama dalagoodu biyhu la tageen.
Dadka Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed waxaa la gudboon iney u soo gurmadaan dadka walaalahooda ah ee dhibaateysan.
Dhibanayaashaan walaalaheen ah haddii aan u gurmano waxay tilaabadaasu ku beereysaa niyad sami iyo kal gacayl ay inoo qaadaan laakiin isweydiintu waxay tahay hadaanaan gacan qaban waxa ay naga aaminayaan?
Wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa wada abaabul ballaaran oo lagu doonayo in loogu gurmado dadka shacabka ee waxyeelladu kasoo gaartay fatahaadda webiga, waxaana hadda magaalooyinka qaar ka billowday ol ole la xiriira arimahaas.
Halkan ka dhagayso Warbixin Wariye Cabdullaahi Soomaaliyo iyo Abuu Muslim ka diyaariyeen Fatahaadda webiga Jubba.